थाहा खबर: डडेल्धुरामा नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगियो
डडेल्धुरामा नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगियो
डडेल्धुरा : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी एकताको प्रक्रिया टुंगिएको छ। जिल्लास्तरीय कार्यदलले जिल्लाका स्थानीय तह र वडाहरूमा नेतृत्वको बाँडफाड गरी पार्टी एकतालाई पूर्णता दिएको हो। जिल्लास्तरीय कार्यदलको बिहीबार सम्पन्न बैठकले एकतापछिको जिल्लाको भागबण्डा टुंग्याएको हो।
जिल्लामा रहेका ७ ओटा स्थानीय तहमध्ये अमरगढी नगरपालिकासहित ४ स्थानीय तहमा तत्कालीन एमाले र परशुराम नगरपालिकासहित ३ ओटा स्थानीय तहमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हुने भएको छ। तत्कालीन एमालेलाई अमरगढी नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका र गन्यापधुरा गाउँपालिकामा नेतृत्व पाउने भएको छ भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रले परशुराम नगरपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका र अजयमेरु गाउँपालिकामा नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ। यसैगरी जिल्लाका ५२ वडामा समेत नेतृत्वको बाँडफाड गरिएको छ। जसअनुसार तत्कालीन एमालेलाई २८ वडा र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले २४ वडामा नेतृत्व पाउने भएको छ।
अमरगढी नगरपालिकामा तत्कालीन एमालेलाई ७ वडा (वडा नं. १, ५, ७, ८, ९, १० र ११) मा नेतृत्व पाउने भएको छ भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ४ वडा (वडा नं. २, ३, ४ र ६) मा नेतृत्व पाउने छ। यसैगरी परशुराम नगरपालिकामा तत्कालीन एमाले लाई ७ वडा (वडा नं. २, ५, ६, ७, १०, ११ र १२) र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ५ वडा (वडा १, ३, ४, ८, ९) मा नेतृत्व पाउने छ।
आलिताल गाँउपालिकामा तत्कालीन एमालेलाई ४ वडा (वडा १, २, ५, ६) र तत्कालिन माओवादी केन्द्रले ४ वडा (वडा ३, ४, ७, ८) मा नेतृत्व पाउने छ। अजयमेरु गाउँपालिकामा तत्कालीन एमालेलाई ३ वडा (वडा १,३,५) र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ३ वडा (वडा २, ४ ६) मा नेतृत्व पाउने छ। नवदुर्गा गाउँपालिकामा तत्कालीन एमालेलाई २ वडा (वडा २, ५) र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ३ वडा (वडा १,३,४ ) मा नेतृत्व पाउने छ। यसैगरी गन्यापधुरा गाउँपालिकामा तत्कालीन एमालेलाई ३ वडा (वडा २, ३, ५) र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले २ वडा (वडा १, ४) मा नेतृत्व पाउने छ।
भागेश्वर गाउँपालिकामा तत्कालीन एमालेलाई २ वडा (वडा नं. २, ४) र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ३ वडा (वडा १, ३, ५) मा नेतृत्व पाउने छ। बिहीबार कार्य दलको बैठक सकिएपछि बाँडफाड गरिएका पालिका तथा वडाहरूको विवरण प्रदेश कमिटीमा पठाइने तत्कालीन एमालेका तर्फबाट कार्य दलका सदस्य वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए।
बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा भएको भागवण्डालाई प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै गाउँ तथा वडा कमिटीहरूले पूर्णता पाउने तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट कार्य दलका सदस्य मानसिंह मालले बताए।